'Por' vs 'Para' ngesiSpanish
Zombini iziphakamiso zithetha '
Izibhengezo ezimbini zaseSpeyin, por and para , ziqhelekileyo zisetyenziselwa igama lesiNgesi elithi "." Ukwahluka phakathi kwabo ngezinye iinkcukacha zibuqili, kwaye ngoko ke por and para zihlala zididekile kubafundi baseSpain.
Ukuba kukho nayiphi na induduzo, iziphakamiso zinokuba nzima kubafundi ukufunda isiNgesi. Kutheni ngamanye amaxesha sithetha into elawulwayo, kwaye ngamanye amaxesha ithi into elawulwayo? Kutheni sihlala endlwini kodwa ekhaya?
Imithetho ngamanye amaxesha iyaphuma ingqiqo.
Isihluthulelo sokuqonda ukuba yiyiphi imigaqo esetyenziswayo kukucinga ngentsingiselo ofuna ukuyidlulisela. Ukuba ndisebenzisa ibinzana elithi "ezintathu kwi dollar" ngesiNgesi, i "for" inentsingiselo eyahlukileyo kuneyona nto "kule ncwadi kukuwe." Kwimeko yokuqala, "ngokuba" ibonisa utshintshiselwano okanye izinga, ngoxa kwimeko yesibini ibonisa injongo okanye isikhokelo. Ngako oko ukuguqulelwa kwesiSpanish kwala mabini amabini ahluke, "tres por un dólar" kunye "este libro es para ti."
Isalathisi esilandelayo ibonisa ezinye zeendlela ezisetyenzisiweyo zezi zimbini zokuqala, kubandakanywa ezingakhange ziguqulelwe "ngenxa."
Ukusebenzisa i- Por
Ukubonisa intshukumo kunye , ngeenxa zonke , malunga okanye malunga : Anduve por las calles de Gijón . (Ndahamba ngezitrato zaseGión.) Nge-Australia ukuya kwi-Land Rover. (Sahamba ngeAustralia nge-Land Rover.)
Ukuchaza ixesha okanye ixesha xa kwenzeka okuthile. Ukuhamba ngeetres semanas . (Sihamba ngeeveki ezintathu.) I- Debes i-penes e-personas por sólo un momento. (Ufanele ucinge ngabanye abantu ngomzuzwana nje.)
Ukuvakalisa isizathu (kungekhona injongo) yesenzo: Me me por la nieve. (Ndawa phantsi ngenxa yekhephu.) Ukulahleka kweengxabano ezivela kwimibandela ye-culturales e ideológicas. (Iimbambano zaqala ngenxa yeenkcubeko kunye neengcamango.)
Injongo nganye : I- poros por ciento. (Iipesenti ezimbini.) Prefiero comer cuatro comidas por día. (Ndikhetha ukutya ezine ukutya ngosuku.)
Injongo exhasa okanye ekuthandeleni : i- Trabajamos nge-derechos humanos . (Sisebenzela amalungelo oluntu.) Akukho nto yokuvota ku-presidente. (Andinakuvotela umongameli.)
Ukuzisa i- arhente yesenzo emva kwesenzi esenziwayo: Fue iscrito por Bob Woodward . (Kwabhalwa nguBob Woodward.) Será comido por las aves. (Kuya kudliwa yiintaka.)
Ukubonisa indlela yokuthutha : Viajaré por avión . Ndiza kuhamba ngeenqwelo. I-Quiero i-Venezuela i-barco. (Ndifuna ukufika eVenezuela ngomkhumbi.)
Isetshenziswe kwiintetho ezininzi : I- ejemplo. (Ngokomzekelo.) Ngentliziyo. (Ndiyacela.)
Injongo ngenjongo okanye okanye: Ukuze usebenzise i-bamba, necesita una poca de gracia. (Ukuze udonse i-bamba udinga ubabalo oluncinane.) Ukulahleka kwe-intanethi kwi-intanethi. (Iibhasi zisetyenziselwa ukuya kumda.)
Ngesibizo okanye isivakalisi njengento, ithetha inzuzo okanye ijoliswe kuyo : I- Es para usted. Kungenxa yenu. Iimpawu zamanqaku kwi-imeyli yeefayile. (Sidinga imali eninzi ekuphuhlisweni kwelizwe.)
Injongo kuye okanye ngokubhekiselele ekubhekiseleleni kwindawo : Voy para Europa. (Ndiya eYurophu.) Salimos para el almuerzo. (Sishiya isidlo sasemini.)
Injongo okanye okanye xa ibhekisela kwixesha elithile : Necesito el regalo para mañana. (Ndiyidinga isipho ngomso.) Vamos i la casa de madre para el fin de semana . (Siya kumama ngeveki.)
Indlela yokusebenzisa i-Preposition 'Para'
Indlela yokudibanisa "I-Gagner" (ukunqoba, ukufumana) ngesiFrentshi
Yintoni eyenza Isivakalisi kwisiFrentshi?
Kutheni Usebenzisa "Il y sera" engalunganga
Usetyenziso olungavamile ukuba 'Lo'
Iingqinisiso zesenzi sesiTaliyane: iPulire
Imbali emfutshane ye-Jazz yesiLatini
Linji Chan (Rinzai Zen) UbuBuddha eChina
Izinto ezi-9 ezithandekayo malunga ne-Sawfish
Funda nge-STP kwiKhemistry
Imbali Yobutyebi Basekhaya
Imbali ye-Ostara, i-Spring Equinox
Indlela yokudibanisa i-Verb Creare yaseTaliyane (ukudala)
UbuGqirha bokuQala kunye noTrafti Izifundo